Antony Hanaovan’ny Olona Krismasy: Fiadanana
‘Fiadanana eo Amin’ny Olona Ankasitrahany’
“Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra, ary fiadanana etỳ ambonin’ny tany eo amin’ny olona ankasitrahany.”—LIOKA 2:14.
Nahoana ny olona no manao Krismasy?
Tian’ny papa sy ny mpitondra fivavahana ho tanteraka amin’ny fotoanan’ny Krismasy ny tenin’ny anjely hoe: “Fiadanana etỳ ambonin’ny tany eo amin’ny olona ankasitrahany.” Mampirisika ny olona hihavana àry izy ireo rehefa mitory teny. Misy koa manao fivahiniana masina.
Na dia misy filaminana aza rehefa Krismasy, dia mihelina izany. Izany, ohatra, no nitranga tany Eoropa tamin’ny Ady Lehibe I, tamin’ny Desambra 1914. Nitsahatra tsy niady ny miaramila anglisy sy alemà tamin’izay ka niara-nankalaza Krismasy. Niara-nisakafo sy nisotrosotro, ary nifoka sigara izy ireo, ary niara-nanao baolina mihitsy aza. Tsy naharitra ela anefa izany. Hoy ny miaramila anglisy iray: ‘Nisy miaramila alemà nilaza tamiko hoe: “Androany isika no mihavana fa rahampitso samy miady ho an’ny tanindrazany.”’
Inona no toro lalan’ny Baiboly?
‘Misy zaza teraka ho antsika. Ny anarany dia hatao hoe Andrianan’ny Fiadanana. Tsy hanam-pahataperana izany fahefana lehibe ananany izany ary tsy hisy farany koa ny fiadanana.’ (Isaia 9:6, 7) Tsara erỳ io faminaniana momba an’i Jesosy Kristy io. Tsy hoe tonga tetỳ an-tany mba hampisy fiadanana mandritra ny iray andro fotsiny izy. Mpanjaka any an-danitra izy izao ka hampisy tena fiadanana mandrakizay eto an-tany.
“Nilaza izany taminareo aho”, hoy i Jesosy, “mba hanananareo fiadanana amin’ny alalako. Eo amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa mahereza! Izaho efa naharesy an’izao tontolo izao.” (Jaona 16:33) Dieny izao i Jesosy dia efa manampy ny Kristianina hihavana tsara. Marina fa mizaka fahoriana izy ireo. Rehefa nianatra Baiboly anefa izy ireo, dia lasa azony ny antony mampisy ny fijaliana. Fantany koa hoe inona no hataon’i Jesosy mba hisian’ny fiadanana maharitra. Lasa miadan-tsaina àry izy ireo.
Manaraka ny tenin’i Jesosy ny Vavolombelon’i Jehovah. Mihavana tsara izy ireo na samy hafa fiaviana sy volon-koditra ary fiteny aza. Tongava mivory any amin’ny toerana fivoriany raha te hahita izany ianao. Hahatsikaritra, toy ny olona maro hafa, ianao amin’izay fa tena mihavana sy miadan-tsaina izy ireo ary tsara kokoa noho izay mety ho tsapanao rehefa Krismasy izany.
Mihavana tsara ny Vavolombelon’i Jehovah na samy hafa volon-koditra sy fiteny aza. Tongava mivory any amin’ny toerana fivoriany raha te hahita izany ianao
Inona no Tsapanao Rehefa Krismasy?—‘Fiadanana eo Amin’ny Olona Ankasitrahany’